तीजअघिकै बुरुकबुरुकः संस्कृति कि विकृति ? | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← एमाओवादीका कार्यकर्ताद्वारा स्कुल बस तोडफोड
स्तनका मुन्टा नाप्ने प्रतियोगिता →
२६ भदौ, काठमाडौं । तीज आउन अझै हप्तादिन बाँकी छ । तर शहरबजारका केही महिलाहरुको फर्याकफुरुक हेर्दा महिना दिन पहिलेदेखि नै तीज लागिसक्यो । जागीरे र फुर्सदिला महिलाहरुलाई अहिले ठाउँठाउँमा पुगेर दर खान र रातो साडीमा ढल्कँदै कम्मर मर्काएर नाचगान गर्न भ्याईनभ्याई छ । ‘हरेक दिनजसो कुनै न कुनै ठाउँबाट निम्तो आउँछ’ गायिका शोभा त्रिपाठीले अनलाइनखबरसित भन्नुभयो -’कहिले त एकै दिन दुई तीनवटा ठाउँबाट पनि आउँछ, कहाँ मात्रै गएर भ्याउने ?’
ग्ाायिका त्रिपाठीलाई मात्र होइन अरु महिला कलाकार र कर्मचारीलाई पनि यस्तै समस्या छ । कहिले यसले, कहिले उसले दर खान निम्ता गर्छ । नजाऔं रिसाउँछन्, जाऔं कहाँ मात्र पुगेर भ्याउने । ‘हिजोआज कहींबाट फोन आउँदा दर खाने निम्तो हो कि भनेर डर लाग्न थालेको छ मलाई त’ गायिका त्रिपाठीले भन्नुभयो -’जानै पर्ने ठाउँमा चाहिँ जान्छु, तर धेरैतिर जान भ्याएको छैन ।’ उहाँको जस्तै समस्या अधिकारकर्मी शारदा पोखरेलले पनि भोग्नुभएको छ । ‘कति ठाउँबाट आउँछ निम्ता त, के गर्नु भ्याउँदिन भनेर कहीँपनि गएको छैन’ पोखरेलले भन्नुभयो ।
तीजको अघिल्लो रात खाने दर हिजोआज शहरबजारमा महिना दिन पहिलेदेखि नै खाने चलन छ । खासगरी शहरबजारमा घर हुने गृहिणी, जागिरे महिला, कलाकार लगायतलाई यो बेला दर खान भ्याईनभ्याई हुन्छ । गाउँघरमा भने अझै पनि तीजको अघिल्लो दिन मात्र दर खाने चलन छ ।
संस्कृति या विकृति’bout आआफ्नै बुझाई
तीजका गीत छाडा र उच्छृँखल भयो भन्ने गुनासो त केही वर्षदेखि बढिरहेकै छ । महिलाले मान्ने चाडमा केटाले समेत गीत गाउने, दोहोरीमा झैं केटाकेटी नाच्ने, माया प्रेमका शब्द मिसाउने चलनले धेरैलाइ तीज विकृतितिर गयो भन्ने चिन्ता छ । महिलाको पीडा, व्यथा र हकअधिकारका कुरा गर्ने अवसरलाई धेरैले अरु गीतमा जस्तै मायाप्रेमको भाव मिसाउने गरेका छन् ।
गीतसँगै जथाभावी दर खाने र खुवाउने प्रवृत्तिका कारण पनि तीजमा विकृति बढ्यो भन्ने टीकाटिप्पणी हुन थालेको छ । तीजको दिन महिलाहरु भोकै बस्ने भएकाले अघिल्लो रात दरिलो, आडिलो, पौष्टिक खानेकुरा अर्थात दर खाने चलन बसेको हो । पहिले पहिले दरका रुपमा मीठाई, खीर तथा दूधले बनेका परिकारको चलन थियो । तर हिजोआज माछामासुलाई समेत दर भनेर खाने गरिन्छ । अझ कतिपयले त दरको रुपमा मदिरा समेत पिउने गरेको सुन्न पाइन्छ ।
तीज आउनु महिना दिन पहिलेदेखि नै दर खाने र दरको रुपमा जस्तोसुकै खानेकुरा पनि खाने चलनलाई के भन्ने त ? ‘नकारात्मक रुपमा मात्र पनि हेर्न हुँदैन’ गायिका शोभा त्रिपाठीले भन्नुभयो -’तीज मान्ने परम्परा घरभित्रबाट बाहिर आएको छ । यसले सामाजिक कार्यसँगै आपसमा मेलमिलाप, सहयोग र सहकार्यको भावना पनि बढाएको छ ।’
हुन पनि कहिले यसकोमा, कहिले उसकोमा गएर दर खाँदा आफन्त र साथीभाइसँगको सम्बन्ध बढाउन सहयोग गरेको छ । कतिपयले दर खाने र गीत गाउने कार्यक्रम गरेर सामाजिक काम पनि गर्ने गरेका छन् । यसलाई त कसैले पनि नराम्रो भनेको छैन । सकारात्मक कुरा नै हो, यो । ‘सामाजिक सद्भाव बढाउन सहयोग गरेसँगै विकृति पनि देखिन थालेको छ’ महिला अधिकारकर्मी शारदा पोखरेलले भन्नुभयो -’लुगाफाटा र गहना प्रदर्शन तथा भड्किलो शैलीले यसमा विकृति पनि देखिन थालेको छ ।’ विकृति हटाउन सके महिनादेखि लाग्ने तीज पनि ठीकै हुने उहाँको भनाई छ ।